ဟာလန်းအပါအဝင်ထိပ်တန်းခေါ်ယူမှုတွေလုပ်မယ်လို့ ကတိပေးလိုက်တဲ့ ဂလေဇာ – FBV SPORT NEWS
လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွေ့ဈေးကွက်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူသစ်ခေါ်ယူရေးစီမံချက်ရှိနေပြီး ဟာလန်းအပါအဝင် ဆိုလ်းရှားအလိုရှိနေတဲ့ ထိပ်သီးကြယ်ပွင့်ကစားသမားကို ယူနိုက်တက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ဂလေဇာက ခိုင်မာတဲ့ကတိကဝတ်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ United Supporter တွေက ဂလေဇာကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီး အချက် ၄ချက်တောင်းဆိုထားတာကို ဂလေဇာဘက်က ပြန်တုံ့ပြန်ပြီး မန်ဖန်တွေဆီ ပြန်ပို့ခဲ့တဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာ ဂလေဇာက အဲ့ဒီလို ရေးသားခဲ့တာပါ။ ဒီစာဟာ ၂၀၀၅ခုနစ်တည်းက အသင်းကို ဝယ်ထားပြီးတဲ့နောက် ပထမဆုံးပရိတ်သတ်များထံသို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာအပြည့်အစုံကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ပရိသတ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျာ
ပရိသတ်ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် April 30 ရက်နေ့က ပေးပို့သောစာကို လက်ခံရရှိပါသည်။ စာပါအကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်ဖတ်ပြီးနောက် သင်တို့၏ အသင်းအပေါ်ထားသော ချစ်မြတ်နိုးမှုကို ခံစားမိပါသည်။
Fan Forum အတွက် သင်တို့အားထုတ်မှုကိုလည်း လေးစားမိပါသည်။ ယင်းသည် အသင်းနှင့် ပရိသတ်ကြား အရေးကြီးသော ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်။ သင်တို့၏ စာတွင် United ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် အောင်မြင်မှုများ၊ ဒုက္ခများကြားက ပေါက်ဖွားလာသော စိတ်ဝိညဉ်များပါဝင်နေသည်ကို ခံစားမိပါသည်။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် Super League တွင် ပါဝင်ခဲ့မှုကြောင့် ပရိသတ်များ ဒေါသထွက်ခဲ့ရသော အနေအထားကို နားလည်ခံစားမိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့သော အမှားများအတွက်လည်း တောင်းပန်လိုပါသည်။ အသင်းရှိ အရေးကြီးကိစ္စရပ်များအား ပရိသတ်များနှင့် သေချာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်လိုအပ်မည်ကိုလည်း ဝန်ခံပါသည်။ ပရိသတ်များ၏ အရေးပါမှု၊ အသင်း၏ level အဆင့်ဆင့်တွင် ချမှတ်ရသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ၌ ပရိသတ်များနှင့် ဆွေးနွေးရန်ကိုလည်း လက်ကမ်းကြိုဆိုပါမည်။
ဘောလုံးလောကတိုးတက်ရေးနှင့် တည်မြဲရေးအတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဘောလုံးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အတူ အလုပ်လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ အားထုတ်မှုများကို UEFA နှင့် FA ၏ မူဝါဒများအတွင်းကနေသာ ပြန်လည်အာရုံစိုက်ပါမည်။
ဆက်လက်၍ ကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနှင့် Manchester United ကို သေချာဂရုစိုက်ကြောင်း၊ United ၏ အစဉ်အလာများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး အင်အားတောင့်တင်းသော အသင်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်တံ့ရေးအတွက် တာဝန်ယူကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်သည် အရေးကြီးဖလားများ ဆွတ်ခူးရေး၊ ထိပ်တန်းခေါ်ယူမှုများနှင့် ငယ်မွေးခြံပေါက်များပေါင်းစပ်ထားသော အသင်းမှ ဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်သောဘောလုံး ကစားနိုင်ရေးဖြစ်ပါသည်။ Ole လက်အောက်တွင် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်ရှိနေသည်ဟုလည်း ခံစားမိပါသည်။ ကွင်းတွင်းအောင်မြင်မှုများအတွက် တောင့်တင်းသော အုတ်မြစ်က အဓိကကျပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် အသင်းအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ မြှုပ်နှံခဲ့ပြီး ယခုနွေရာသီတွင်လည်း ငွေကြေးသုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသင်းရှိ facility များသည် ဥရောပတွင် အကောင်းဆုံးထဲမှ တစ်ခုဖြစ်စေရန် Old Trafford နှင့် လေ့ကျင့်ရေးကွင်းများတွင်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိုအပ်သည်ဟု နားလည်ထားပါသည်။ ဒီအတွက်လည်း ပွဲနေ့အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပရိသတ်များထံနှင့် တိုင်ပင်သွားပါမည်။
ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း သင်ခန်းစာများကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော နားထောင်သူများ ဖြစ်လာစေခဲ့ပါသည်။ သင်တို့၏ စာပါ အကြောင်းအရာများရှိ ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ဖြေရှင်းသွားပါမည်။
ထိုထဲမှ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ထုတ်နှုတ်ရလျှင် စတော့ဈေးကွက်သို့တင်ထားသော ဘောလုံးအသင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အညီ ပရိသတ်များက အသင်းရှိ ရှယ်ယာများကို ပိုင်ဆိုင်လိုသည်ဟု နားလည်ထားပါသည်။ MUST နှင့် ယခင်ကလည်း ဆွေးနွေးဖူးသလို ပရိသတ်များရှယ်ယာဝယ်ယူရေးအတွက်လည်း ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားပါမည်။
ဘောလုံးအပေါ် အစိုးရနှင့် ပရိသတ်များ၏ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များသည် ပရိသတ်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအတွက် နည်းလမ်းသစ်များရှာဖွေရာတွင် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူပါသည်။ ပရိသတ်များကို အားကစား၏ အချက်အခြာ ဖြစ်စေလို၍ ကျွန်တော်တို့အနေနှင့် ဝေဖန်မှုများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကိုင်တွယ်ဆက်ဆံသွားပါမည်။
ယခုကတိကဝတ်များသည် ပရိသတ်များနှင့် နောင်စကားပြောခန်းများ၏ နိဒါန်းဟုယူဆပြီး သင်တို့၏ တောင်းဆိုချက်များကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းရန် အတူတကွ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ Forum မှ ပရိသတ်များနှင့်လည်း ရာသီကုန်ပွဲစဉ်ပြီးသည်နှင့် အစည်းအဝေးထိုင်ရန် အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်သွားပါမည်။
ယခု Forum အပေါ် ကြိုးစားမှု နှင့် အသင်းပေါ်ထားသော စွဲလမ်းမှုအား ကျေးဇူးထပ်တင်ပါမည်။ မကြာခင် သင်တို့နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် မျှော်လင့်နေပြီး အသင်း၏ ရာသီကိုလည်း အောင်မြင်မှုများနှင့် ပိတ်သိမ်းနိုင်ရန် စောင့်မျှော်နေပါသည်။
တွဲဖက် ဥက္ကဌ နှင့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်
ဂလေဇာရဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာအရဆို လူသစ်ခေါ်ရေး ကတိကဝတ်တွေပါဝင်နေပြီးလက်ရှိမှာ ဆိုလ်းရှားလိုချင်နေတဲ့ ပေါင်သန်း ၁၅၀တန် ဆိုလ်းရှား ပေါင်သန်း ၉၀တန် ကိန်းနဲ့ ဆန်ချို တို့အပြင် အသင်းဟောင်းလေးကို ပြန်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ရိုနယ်ဒိုကိုလည်း ဒီနှစ်နွေမှာ ခေါ်ယူပေးဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
သူတို့ကို အိုးထရက်ဖို့မှာ မြင်တွေ့ရမလားဆိုတာတော့ ကမ္ဘာသိ “အိတ်ဖွင့်စာပေးပို့ခဲ့တဲ့” ဂလေဇာရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပဲဆိုင်ပါလိမ့်မယ်. မန်ဖန်တွေရော ဂလေဇာက ကတိတည်မယ်ထင်ပါသလား??